Vivo Z5x, ekwentị mkpanaaka nwere ihuenyo mebiri emebi na nnukwu batrị | Androidsis
N'oge na-adịghị anya Vivo Z5x ga-abata, ekwentị mkpanaaka nwere ihuenyo nwere oghere na batrị buru ibu
Foto ọhụrụ ewepụtara, nke yiri ka ewerere ya na ụlọ ọrụ Vivo, na -ekpughe nke ahụ ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ n'ekwentị nwere oghere nwere oghere.
Onye leaker nke kesara onyonyo a ekwuola nke ahụ ekwentị a nwere ike ịda n'ahịa ka Vivo Z5x. Ọ kọwakwara nkọwa ụfọdụ nke ọdụ ụgbọ mmiri, dị ka nnukwu batrị ya.
Dabere na onye nyocha ahụ, Vivo Z5x ga -ejupụta na nnukwu batrị ike 5,000 mAh. Enwere ike ịhụ oghere ebe etinye ya n'akụkụ aka ekpe nke ihuenyo ahụ.
M bi na Z5x nwere ihuenyo mebiri emebi na batrị ya
Ọ bụ ihe nwute, onye na -eri ihe anaghị ekerịta ozi ọ bụla gbasara nkọwa ekwentị, mana ihe niile na -arụtụ aka na ya batrị Vivo Z5x nwere ike ịkwado maka chaja ngwa ngwa. Enwere olile anya na smartphone ga-egosipụta ọdụ ụgbọ mmiri USB-C.
Ozi a na -edochaghị anya nke onye ọzọ kesara ọnụ mmiri na-atụ aro na ngwaọrụ nwere ike na -akwado site na Snapdragon 712 o Snapdragon 730. Akara a na -etinye na ngosipụta ekwentị na -ekpughe na o nwere nọmba ụdị 'V1911'. Ọzọkwa, ụbọchị nrụpụta Eprel 25 nke ekwuru na batrị Vivo Z5x na -egosi na mwepụta ya nwere ike ọ gaghị anọ n'azụ.
Vivo Z5x ga -abụ ekwentị Vivo nke abụọ ga -eji batrị 5,000 mAh, mgbe Vivo Y17 gosipụtara na India n'ọnwa Eprel. Onye nrụpụta ahụ yikwara ka ọ na -akwado iwebata Y17 n'oge adịghị anya na China dịka Vivo Y3. Ekwentị mkpanaaka ahụ nwere ihuenyo IPS LCD nwere 6.35-inch nke na-enye mkpebi HD + nke pikselụ 1,544 x 720.
MediaTek Helio P35 ga -enye ike Y3 yana 4GB Ram. Ọ ga -enwe ebe nchekwa dị n'ime 128 GB. Ọkpụkpụ azụ nke ekwentị ga-enwe igwefoto 13-megapixel + 8-megapixel + 2-megapixel kamera atọ. Maka iwere selfies, ọ ga-egosipụta igwefoto n'ihu 8-megapixel. Ekwentị na -abịa na batrị 5,000 mAh nke enwere ike chajịa site na ọdụ ụgbọ mmiri microUSB.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » N'oge na-adịghị anya Vivo Z5x ga-abata, ekwentị mkpanaaka nwere ihuenyo nwere oghere na batrị buru ibu
Kaa akara n'okporo ụzọ rọbọt iji wepụta ha ebe ha kwesiri ikwupụta na Express Thru